XOG: Mid kamid ah Musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliyaoo Lagu Wado in uu is Casilo – Puntland Voice
February 6, 2017 11:49 am Views: 33
Xog hoose oo laga helay Musharaxiinta madaxweyne ayaa sheegaysa in uu jiro hadal heyn badan oo ku aadan in uu tanaasulayo musharax caan ah oo isku soo taagay xilka Madaxweynaha Soomaaliya.
Warar si aad ah u soo xoogeysanayay saacadihii la soo dhaafay ayaa sheegaya in Ganacsadaha caanka ah ee Caddow Cali Gees oo ka mid ah Musharaxiinta ugu culus uu qorsheynayo inuu tanaasul sameeyo, maalinta ay dhaceyso doorashada Madaxweynaha oo ku beegan Arbacada soo socota.
Ilo muhiim ah oo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in wada hadalo illaa iyo hada meel dhexe maraya ay u socdaan Ganacsade C/llaahi Cali Axmed (Caddow Cali Gees) iyo xubno ka socda Madaxweyne Xasan Sheekh, iyadoo wada hadaladan laga gol leeyahay in labada Musharax is baheystaan,
Wada hadalkan ayaa bilowgiisa hore ahaa in Musharax Caddow Cali Gees uu tanaasul ka hor khudbadaha Musharaxiinta, balse waa uu diiday, iyadoo markii dambe lagu qanciyay marka la gaaro doorashada Madaxweynaha.
Musharax Caddow Cali Gees oo ah Ganacsade maalqabeen ah, ayaa bilo ka hor isku soo sharaxay xilka Madaxweynaha, isagoo ka mid ahaa xildhibaanadii ku soo baxay dhaqaalihii ugu badnaa doorashadii ka dhacday Cadaado.
Warar lagu kalsoonaan karo ayaa hseegaya in Musharax Caddow Cali Gees uu taageeri doono Musharax Xasan Sheekh marka la gaaro wareegyada hore ee doorashada, si uu xoojiyo.
Khudbadii uu ka jeediyay Sabtidii Baarlamaanka oo aheyd mid iska koobneyd, ayaa aad uga duwaneyd khudbadaha kale ee Musharaxiinta oo si kulul u weerarayay Madaxweyne Xasan Sheekh 4-tii sano ee uu xilka hayay